” သရဲ (၁ ) “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ” သရဲ (၁ ) “
” သရဲ (၁ ) “
Posted by YE YINT HLAING on Jun 14, 2012 in My Dear Diary | 21 comments
ကျွန်တော် အခုစာရေးနေရင်း ပြန်ဝင်လာတဲ့ အတွေးနဲ့တင် ကြက်သီးထ မိတယ်။ ဘဝမှာ ဒါမျိုး နှစ်ခါကြုံ ခဲ့ ဘူးပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခွန်နှနှစ်လောက်က အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ ရှမ်းပြည်စီမံကိန်း ဆိုက်ခေါင်-နမ့်စန် ရထားလမ်းသစ် ရဲ့ ကုမ်မဏီ တခုမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ တနေ့ ကုန်မနီကလိုအပ်တဲ့ ပျစ်စည်း ဝယ်ဖို့တောင်ကြီး တက်တယ်။ ဟော်တယ်တခုမှာကုမ်မနီ စာရိတ်နဲ့တည်းတယ် ( ဟော်တယ်အမည် မရေးတော့ပါ )။ဒီတကြိမ်နဲ့ဆို သုံးကြိမ်မြောက်ပေါ့။ အရင် နှစ်ခေါက် တုန်းက အခန်းနံပတ်( 1 ) မှာပဲတည်းတည်။ ဒီတခေါက် ကံမကောင်း ချင်တော့ အခန်းနံပတ် ( 1) မရ ပဲ အခန်းနံပတ် ( ၁၈ ) ရတယ်။ နှစ်ယောက်ခန်း။ အခန်းမကျန်တော့ဘူး။။။။ဒီတခန်းပဲရှိတော့တယ် လို့ ဝန်ထမ်းဧည့်ကြိုကပြောတယ်။ ကျွန်တော်က ဒါဆိုနှစ်ယောက်စာပေးရမှာလားမေးတော့ သူကမန်နေဂျာကို မေးပေးမယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က တယောက်ထဲ တည်းပီး နှစ်ယောက်စာမကုန်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ မန်နေဂျာ အင်းသားကြီး ရောက်လာပီး ကျွန်တော့ကို မှတ်မိပီး နှုတ်ဆက်တယ် ။ပီးတာ့ တယောက်စာပဲ ပေးပါလို့ ပြောတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အခန်း(၁၈) မှာတည်းခဲ့တယ်။ တညနေလုံး ဈေးဝယ် အခန်းပြန်ပို့နဲ့ ည( ၈ ) နာရီ ကျော်မှ တောင်ကြီး ညဈေး မှာ အပန်း ဖြေ နိုင်တော့တယ်။အရက် နဲ့ပေါ့။ သောက်တယ်။။ ပီးတော့ ရှမ်းခေါက်တပွဲ စားပီး ဟော်တယ် ပြန်တယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ဂက် ( စ ) မီးခြစ် တလုံးဝယ်တယ်။ အခန်းရောက်တော့ ည (၁၀ ) နရီ ကျော်ပြီ။ ဒီအချိန်အထိ ဘာ ပြသာ့နာ မှ မရှိ သေးဘူး။ ( ၁၀ ) နာရီ ခွဲ လောက်အိပ် ယာ ဝင်တယ်။ ပင်ပန်းတာ နဲ့ အ ရက် ပေါင်းပီး နှစ်နှစ် ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်သွားတယ်။
ကျွန် တော့ ကိုယ်ပေါ် လူတ ယောက် တက် ဖိတယ်။ ခန်ဒါ ကိုယ် က အလေးကြီး မှို့ အသက် ရှူ ကြတ်လာတယ်။ တွန်း ဖယ် ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကျွန်တော် နိုးလာတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ရေသောက်ပီး ပြန် အိပ်တယ်။ အလွယ် တကူ ပဲ အိပ်ပျော်ခဲ့ပြန် တယ်။ ဟော။။။။ဖိ ပြန်ပြီ။။။။ဒီ တခါ အငြိမ်မနေဘူး။။။။ကျွန် တော့ ကိုယ်ပေါ် တက်ဖိပီး လှုပ်နေတယ်။ အိပတဝက်နိုးတဝက် စိတ်မျိုး နဲ့ သိ နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် မျက်နှာကိုကြည့် ဖို့ ကြိုးစား တယ်။ စောင်ကြီးပတ်ထား တော့ မြတ်နှာက မသဲကွဲ ဘူး။ ပီး တော့ ခန် ဒါကိုကြီး က ရှည်ရှည် လာတယ်။ ခုတင် နှစ်လုံး ကြား က စားပွဲပေါ်တင် ထား တဲ့ မီးခြစ်ဆီ ကို လက်က ယောက် သွား ပီး ည အိပ်မီး မ သဲကွဲတဲ့ မျက်နှာကို မီးခြစ်နဲ့ ခြစ်ကြည့် တယ်။ ခန်ဒါကိုကြီး ရှည်ရှည် သွား လို့ သဲ သဲ ခွဲ ခွဲ မမြင်ရ ပဲ လက် ကို မီး လောင် တယ်။ပကတိ အသိ စိတ် ဝင် လာပီး ခုတင် ပေါ် က ဝုန်းကနဲ ထ ပီး အခန်း အပြင် ထွက် ပြေး တော့ တာ ပဲ။
ဧည့်ကြိုကောင်တာ သွား။။။။ အ ကျိုး အကြောင်း ရှင်း ပြ တော့ ဝင်ထမ်း ကောင်လေး မျက်နှာ မကောင်း တာရယ် ကျွန်တော် ပြောပြ နေတဲ့ အချိန် အထူးအဆန်းကြီး မဟုတ် သလို နားထောင် နေ တာ ကို ကြည့်ပီး အခန်း(၁၈) နဲ့ ပတ်သက်ပီး ကြိုသိထာတဲ့ အကြောင်းအရာ တချို့ ရှိ လိမ့် မယ်လို့ တွေး မိတယ်။ လိုရင်းပြောရ ရင် အဲဒီညက ဧည့် ကြိုကောင်တာ နားမှာ မနက် ( ၃ ) နာရီ လောက် က နေ မိုးလင်းတဲ့ အထိ ဝင်ထမ်း ကောင်လေး နဲ့ စကားထိုင် ပြော နေ ခဲ့တယ်။ သူက ပြောတယ်။။။ အကို။။။ တခြား လူ တွေ ကို မ ပြော ပါ နဲ့တဲ့။။။။သူတို့ ဟော်တယ် နာမည် ပျက် မှာ ဆိုးလို့ ပါတဲ့။။။ အဲဒီ အခန်း မှာ မနှစ် က အခြောက် ကြီး တ ယောက် မူးယစ်ဆေး သုံးရင်း သေ သွားတယ် တဲ့ ဗျာ။။။ ဒါကြောင့် ထင် ပါ ရဲ့ ။။။ နှာခေါင်းထဲ အခြောက် နံ့ ကြီး လည်း ရ နေ ခဲ့တာ။။။.
ဘားဂလစ် နဲ့ ရေး ရ တာ အရမ်း ကြာတယ်ဗျာ။။။ စိတ် တိုင်း ကြ ရေး လို့ လည်း မ ရ ဘူး။ သရဲ ( ၂ ) ခါ အခြောက် ခံ ခဲ့ ရ ဘူး တဲ့ ကိုယ်တွေ လေး ရေး ချင် လို့ ရေး တတ် သလို ရေးစမ်း ကြည့်မိတယ်။ ဖတ်လို့မကောင်းရင် စောရီး ဗျာ။။။
သရဲ ( ၂ ) က တော်တော် ကြမ်းတယ်ဗျ။။။ ရေးရင် စာလုံး တော်တော် များ မယ်။။။အားရင် ရေးကြည့်ချင်သေးတယ်။။။။ ကြောက်စရာ စိတ်ဝင်စား စရာ မ ကောင်းရင် လူသစ်လေး မို့ ခွင့်လွတ်မယ်မဟုတ်လား?
သရဲ ဆိုအားပေးတဲ့ ရွာသူားများ စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ ..
ကံတော့ တော်တော်နိမ့်နေမယ်နော် .. သရဲနဲ့တွေ့တာတောင် အခြောက်နဲ့ တွေ့ရရှာတယ် .. အစိုလေးဆို တော်သေး .. :grin:
ထူးဆန်းတာထက် ပိုထူးဆန်းတာ (အခြောက်သူရဲ ဖြစ်နေတာ) ကို ကိုထူးဆန်းက မြင်တတ်ပါပေတယ်။
အော်……….. စီဂျေ မျက်စေ့။
ဒီမှာ ရေးနေကြတဲ့လူတွေဟာလည်း လက်သင်ရင်း စမ်းရေးရင်းနဲ့ ရေးလာကြရတဲ့သူတွေ များတာမို့ အားမငယ်ပါနဲ့။
ဒီလိုပဲ ရေးရင်းနဲ့ အနည်းဆုံး မြန်မာစာလက်ကွက် မြန်လာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတော့ ရမှာပဲ။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရေ … တက်ဖိ ခံ ရရုံပဲလားဗျာ …. လျှိုထားတယ် ထင်မိတယ်။
မှတ်ထားဦးမှ……ဘယ်ဟိုတယ်ပဲ တည်းတည်း အခန်းနံပါတ် 18 ကိုေ၇ှာင်၇မယ်…..
သရဲကလဲ ဆေးသမား အခြောက်ကြီးဆိုပါကလား..
အဲဒီတည်းခိုခန်းမှာ သဂျီးကို တစ်ညလောက် သွားအိပ်ခိုင်းလိုက်ချင်ပါဘိ….
မနက်ကျရင် သဂျီးခမျာ မျော့မျော့ပဲ ကျန်တော့မှာ မြင်ယောင်သေး..အဟေး..အဟေး..
နောက်လည်း ရေးဦး ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ။
ကိုယ်ပေါ်လူတယောက်တက်ဖိတယ် ဟာဗျာ ညံတာ
အဲနေရာမှာ ကိုပေဆို ပွဲသိမ်းပြီဗျ
အခြောက်နံ့ရတယ်ဆိုတော့ ကိုရဲရင့်လှိုင်က အရင်ကတည်းက အခြောက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးတယ်နေမှာနော်။
ကိုရဲရင့်လှိုင် ဇာတ်လမ်းက ဖတ်ပြီး ကြက်သီးထစရာကြီးနော် … ။
ကိုဖတ်တီးကတ်လည်း .. အဲ့ဒီလို ပဲ တည်းခိုခန်းလား ဟိုတယ်လားမသိဘူး .. အခန်းထဲမှာ ဗြောင်းဆန်အောင် သရဲကမွှေတဲ့အကြောင်းရေးဖူးတယ် … ။
ဟိုတယ်တွေ ၊တည်းခိုခန်းတွေ အဲ့ဒါတွေ ဆိုးတာပေါ့ …. ။ သေတယ်ဆိုတာ သိလျှင်လည်း …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ … ကောင်းရာ မွန်ရာ ရောက်ဖို့ ……. အလှူတန်းပေးတာမျိုး ၊ ပရိတ်ရွတ်ပေးတာမျိုး လုပ်သင့်တာပေါ့ ….. ။
အော်ကိုရဲရင့်လှိုင်ရယ် အခြောက်ခံရတာတောင် သရဲက အခြောက်ကြီးဖြစ်နေပါလားဗျာ… အစ်ကိုရုပ်က ဂျော်ကြည်ဘဲ ရုပ်မို.လို.နေမှာပေါ့……… နောက်တာနော…
Tab အပေါ်ကကီးလေးကို တွဲသုံးရင် အိုကေပဲဗျ..
ဒါနဲ့ အခြောက်နံ့က ဘယ်လိုများလဲဗျ ဟင်င်..
ကြောက်စရာကြီး။ နောက်ဆိုရင် နေရာအသစ်ရောက်ရင် ဘုရားရှိခိုးပြီး။ အမျှဝေမေတ္တာပို့အိပ်နော်။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။။။ ကံ အထူး ညံ့ နေချိန်မို့ ထင်ပါရဲ့။။။ သရဲအခြောက်ခံရတာတောင် သားသားနားနား လေး မဟုတ်ဘူး။။။ ချစ်စရာ သရဲမလေးဆိုတော်သေး။။။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းကစပီး အနံ့ ပြင်းပြင်းရှရှ တွေ ကြုံတိုင် ပြို့ချင်တယ်ဗျို့။။။.
နောက်တခါ ကြုံခဲ့ ရတာက သရဲ ရထားစီးနေရသလို တလမ်းလုံး တမျိုးပီးတမျိုးခြောက်လိုက်ကြတာ။။။ အ သက် ထွက်မတတ် ဗျို့။။။ တယောက်ထဲ ညအချိန်မတော် သွားတာလာတာမျိုး ခုနောက်ပိုင်းဆင်ချဉ် တယ်ဗျို့။။။ သရဲ ( ၂ ) မှာ ဒီအကြောင်းလေး ရေး ပါဦးမယ်။။အားပေးကြသူများ။။။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း။။။။
ဟုတ်ကဲ့ သရဲ ၂ ကို မျှော်နေပါတယ်။ အထူးအဆန်းလေး တွေ သိရတာပေါ့။
အနီးစပ်ဆုံးလား။။။အင်း။။။ နောက်တော့မှ ပြောပြတော့မယ်ဗျာ။စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ဟဲဟဲ။။။.